नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन ८, २०७६, ०९:३१
काठमाडौं– सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ।
बाँस्कोटा (बीचमा बोल्दै) : अँ..
बाँस्कोटा (बीचमा बोल्दै): ठीक छ
मिश्रः यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याकमा जाने कि तपाइँले भनेअनुसार नै जाने त, भन्नुस्।
मिश्र (बाँस्कोटाको कुरा काट्दै) : कुराचाहिँ मैले राखेको छु
मिश्रः यसमा टोटल उसकोचाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने हो होइन फेरि
मिश्रः केही न केही त भइरहेको छ होइन त्यही बेसमा जाने हो हामी त अब...उनीहरुले त अरुले नि त्यही मूल्य त्योभन्दा अलि बढी हाल्यो उनीहरुको मूल्यमा भन्दा अलि बढी हालेको भए पुग्थ्यो होइन त्यसमा त्यस्तो केही छैन बेसचाहिँ तपाइँहरुकै उसमा जाने हो हामी हँ हँ त्यसो भा तपाइँले चाहिँ..
बाँस्कोटाः अब सकेसम्म २५, २७ अर्बमा यो टोटल सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मान्नुहोस २५ निस्कियो भने कति आउँला?
मिश्रः ७० जति आउदैन (७० करोड) यो आउट अफ उसमा जाँदाखेरि ७० को हाराहारीमा ६० देखि ७० को हाराहारीमा आउँ छ कि?
बाँस्कोटाः तपाइँलाई के गर्छन्? तपाइँलाई छुट्टै गर्छन्?
मिश्रः यसमा चाहिँ ३०, ७० प्रतिशत तपाइँहरुलाई दिने होइन ३० प्रतिशत हामी राख्ने भन्ने टार्गेट छ। हाम्रो एकदम ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ, त्यसका केही छैन।
बाँस्कोटाः तपाईं हामी हिसाब...(भन्न खोजेको कुरा बुझिँदैन)
बाँस्कोटाः एउटा के नरहनुस् भने...यस्तो कुरामा यी मु...(मुख छाड्दै) कर्मचारीसँग लाग्यो भने यिनीहरुले हेप्छन्। कुरा बुझ्नु भयो?